2 Samuel 23 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
23 Eyinom ne Dawid nsɛm a etwa to:+“Yese ba+ Dawid nsɛm,Ɔbarima a wɔmaa no so,+Nea Yakob Nyankopɔn asra no,+Nea wɔtoo ne ho dwom dɛdɛ+ wɔ Israel no nsɛm ni. 2 Yehowa honhom nam me so kasae,+Na n’asɛm wɔ me tɛkrɛma so.+ 3 Israel Nyankopɔn kae,Israel Botan no kasa kyerɛɛ me sɛ,+‘Sɛ nea odi adesamma so no teɛ,+Na odi hene Onyankopɔn suro mu+ a, 4 Ɛte sɛ anɔpa hann, bere a owia pue,+Anɔpa a omununkum nni hɔ.Osu atɔ awie no, owia hyerɛn, na wura fifi asase so.’+ 5 Ɛnyɛ saa na me fie te Onyankopɔn ani so+ anaa?Efisɛ ɔne me ayɛ daa apam,+Na watoto ho biribiara pɛpɛɛpɛ.+Efisɛ ɛno ne me nkwagye+ nyinaa ne m’anigye nyinaa.Ɛnyɛ ɛno nti na ɔbɛma anyin?+ 6 Ahuhufo+ de, wɔn nyinaa tu yera+ te sɛ nkyɛkyerɛ;+Ɛnyɛ nsa na wɔde sesaw. 7 Sɛ onipa rekɔ wɔn so a,Ɔde dade ne peaw hyehyɛ ne ho;Ogya na wɔde bɛhyew wɔn dwerɛbee.”+ 8 Dawid nnɔmmarima+ no din ni: Takemoni Yoseb-Basebet+ a ɔyɛ baasa no so panyin. Ɔno na ogyinaa ne nan so de peaw kunkum nnipa ahanwɔtwe da koro. 9 Ahohi ba Dodo+ ba Eleasar+ na odi hɔ. Ɔka nnɔmmarima baasa a na wɔne Dawid nam a wokotwaa Filistifo no mpoa no ho. Ná wɔaboaboa wɔn ano wɔ hɔ sɛ wɔrebedi ako, enti Israel mmarima san wɔn akyi.+ 10 Ɔno na ɔsɔre kunkum Filistifo no kosii sɛ ne nsa gyenee, nso ne nsa fam ne nkrante no ho,+ ma enti Yehowa de nkonimdi kɛse gyee ɔman no+ saa da no; ɔman no de, nea wɔyɛe ara ne sɛ wodii akyi yiyii wɔn a wakunkum wɔn no ho nneɛma.+ 11 Nea odi ne so ne Hararini Agee ba Samma.+ Na Filistifo no boaboaa wɔn ho ano wɔ Lehi; ná asase bi da hɔ a asedua+ pii wɔ so, na Filistifo no nti, na ɔman no aguan. 12 Na ɔtew gyinaa asase no mfinimfini ko gyei; okunkum Filistifo no, na Yehowa de nkonimdi kɛse gyee wɔn.+ 13 Na atitiriw aduasa no mu baasa+ kɔɔ Dawid nkyɛn Adulam+ ɔbodan no mu otwabere; saa bere no, na Filistifo no abɔ nsra Refaim asasetaw+ no so. 14 Saa bere no, na Dawid wɔ beae a ɛhɔ kɔ yɛ den+ no, na na Filistifo awɛmfo dɔm+ nso wɔ Betlehem. 15 Akyiri yi, biribi yɛɛ Dawid akɔnnɔ, na ɔkae sɛ: “O sɛ anka merenya Betlehem kurow pon ano abura mu nsu anom a!”+ 16 Ɛnna nnɔmmarima baasa no bɔ wuraa Filistifo nsraban no mu, na wɔkɔsaw Betlehem kurow pon ano abura mu nsu, na wɔde brɛɛ Dawid.+ Nanso wannom, na mmom ohwie guu+ fam maa Yehowa. 17 Na ɔkae sɛ: “O Yehowa, ɛmpare me+ sɛ mɛyɛ saa! Mmarima a wɔde wɔn kra too wɔn nsam yi mogya na mennom+ anaa?” Enti wannom. Eyi ne ade a nnɔmmarima baasa yi yɛe. 18 Seruia+ ba Yoab nua Abisai+ na na ɔyɛ aduasa no so panyin. Ɔno na otumi gyinaa ne nan so de peaw kunkum nnipa ahasa; ná ɔwɔ din sɛ baasa no.+ 19 Ná odi mũ sen aduasa no mufo a wɔaka, na odii wɔn so panyin, nanso wanto baasa a wodi kan no.+ 20 Yehoiada+ ba Benaia,+ ɔkokodurufo aseni no yɛɛ nneɛma pii wɔ Kabseel;+ ɔno na okum Moabni Ariel mmabarima baanu no. Ɔno ara nso na osian kokum gyata+ wɔ asubura mu da bi a sukyerɛmma tɔe.+ 21 Ɔbarima yi ara nso na okokum Egyptni ɔbran bi+ no. Ná Egyptni no kura peaw de, nanso ɔde abaa kɔɔ Egyptni no so kohwim peaw no fii ne nsam, na ɔde ne peaw no kum no.+ 22 Saa nneɛma yi na Yehoiada ba Benaia+ yɛe, na onyaa din sɛ nnɔmmarima baasa+ no. 23 Ná odi mũ sen aduasa no, na mmom wanto baasa a wodi kan no. Nanso Dawid sii no ankɔbeahene.+ 24 Ná Yoab nua Asahel+ ka aduasa no ho; nnɔmmarima no bi ne Betlehemni Dodo ba Elhanan,+ 25 Harodni Samma,+ Harodni Elika, 26 Paltini Heles,+ Tekoani Ikes+ ba Ira,+ 27 Anatotni+ Abiesar,+ Husani+ Mebunai, 28 Ahohini+ Salmon, Netofani Maharai,+ 29 Netofani Baanah ba Heleb,+ Ribai ba Yitai+ a ofi Benyaminfo kurow Gibea mu, 30 Piratoni Benaia,+ Hidai a ofi Gaase+ subon no mpɔtam hɔ, 31 Arbatni Abi-Albon, Bahurimni Asmawet,+ 32 Saalbonni Eliaba, Yasen mma, Yonatan,+ 33 Hararini Samma, Hararini Sarar ba Ahiam,+ 34 Maakatni ba Ahasbai ba Elifelet, Giloni Ahitofel+ ba Eliam, 35 Karmelni Hesro,+ Arabiani Paarai, 36 Natan+ a ofi Soba ba Yigal, Gadni Bani, 37 Ammonni Selek+ ne Beerotni Naharai a wɔyɛ Seruia ba Yoab akodekurafo, 38 Yitrini+ Ira, Yitrini Gareb,+ 39 Hitini Uria.+ Wɔn nyinaa si aduasa ason.